Namuhla ukuphumula e Dubai liba ehlonishwayo ngaphezulu. Umuzi omuhle ogwini ePersian Gulf, phakathi i tale emangalisayo ehlane izimpawu - ukuheha izinkulungwane zezivakashi lapha.
Dubai - kuyinto lamadolobha esimanjemanje kakhulu emirate we-United Arab Emirates, i-isikhungo international kwezokuvakasha, amabhizinisi, ezemidlalo. Uma uthi nhlá, Dubai unikina bokwakhiwa kwezindlu zayo enkulu nge impumelelo yesimanje engineering, nasezingeni eliphezulu of service. Dubai - kuba imbobo enkulu kunazo zonke e Gulf, lapho kukhona amathempeli lasendulo nezigodlo, kuhlangene izakhiwo ultra-yanamuhla yezakhiwo. Bay ihlukaniswe edolobheni zibe izingxenye ezimbili: Bur Dubai kanye Deira.
Enye yezindawo le industry yetourism Dubai ibhizinisi ezokuvakasha. Izinkulungwane zabantu osomabhizinisi ezivela emhlabeni wonke. Amaholide e Dubai - yikhono kusimangaze yezitolo. Amasiko asempumalanga Oriental kuhlangene ukuhweba ibhizinisi lesimanje. Lona lapho ungakwazi ukuthenga imikhiqizo abakhiqizi ngamanani aphansi. Entwasahlobo ka-Dubai iphatha yonyaka yezitolo umkhosi, izinkulungwane zabantu abathengi abafuna ukusizakala isaphulelo eningi.
Ezemidlalo e Dubai - yindaba ehlukile. Namuhla kukhona ngamazwe ezingeni eliphezulu imincintiswano. Dubai esilindele bonke abafisa ngenkuthalo uphumule. Lapha uzothola ezemidlalo amasimu upscale, igalofu, ski resort, amakilabhu daving- kanye yacht. E Dubai, lithandwa kakhulu ihhashi ogibele nelithi ikamela ugibele.
Amaholide e Dubai - kuba eziningi imisebenzi ejabulisa kanye nokuvakashela izindawo. Isiqiwu sezilwane e Dubai eqoqwe zezinhlobo ezingavamile izilwane nezinyoni. Ipaki yokuzijabulisa win kanye nabantu abadala, izingane kanye ezithakazelisayo ezikhangayo engavamile zabo, imidlalo, ukuzijabulisa. Ukucula emithonjeni - ubuhle ukudalwa ubuchwepheshe yesimanje okungavamile.
Ungakhohlwa ukuthi Dubai - ezweni Arab bendabuko. Naphezu yeningi yayo kuqhathaniswa nezinye Emirates, Dubai amasiko Islamic kugcina amasiko asempumalanga. Ngakho abalandeli East, ukuya eholidini e Dubai, kuyoba mnandi kakhulu ukufunda mayelana nesimo umlando araskogo, ukubheka ukuphila ogwadule zamaBedouin uthinte okunethezeka of izikhulu Arab ubone ezindlini zabo zamakhosi okungavamile.
exoticism Eastern nokufeza yesimanje ngesayensi nobuchwepheshe - ukuthi kuyinto Dubai resort namuhla.
Tours Dubai rossiykom ethandwa emakethe izivakashi kusukela Okthoba kuya May. Ngalesi sikhathi, ngendlela emangalisayo enhle ukuthatha ikhefu kusukela kubanda amabhishi cozy Dubai.
Amahhotela etholakala eduze ngokushesha ugu banezidingo amabhishi zabo zangasese. Amahhotela City ngokuvamile ukuhlela Shuttle ebhishi. Izivakashi Ungakhetha kokubili ezikhokhelwayo khulula lolwandle. E Dubai, kukhona ezimbili ezinkulu ebhishi zokungcebeleka nge evuthiwe ingqalasizinda yangaphakathi. Isici esikhethekile emabhishi e-UAE - okubizwa ngokuthi izinsuku zabesifazane, lapho umnyango ebhishi kwenqatshelwe amadoda, futhi izisebenzi siqukethe abesifazane kuphela. Kufanele uqaphele ukuthi endaweni emabhishi kule Emirates asivunyelwe ukuze sunbathe topless.
Dubai amahhotela zaziwa ukunethezeka induduzo yabo, bendabuko izihambi. Nokho, akuvamile ukuthola ezihlukahlukene okunjalo izithombe e-Europe. Ngo -Dubai amahhotela ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uthole okuningi izipesheli ezemidlalo asebenzayo kuka ukuzijabulisa. Kuyathakazelisa ukuthi kuyi-enye ingqalasizinda ehhotela Emirates akuyona omkhulu njengoNkulunkulu e-Dubai.
Ukukhetha bona ngomzuzu wokugcina e Dubai, izivakashi kudingeka bazi ezinye izici iholide e-United Arab Emirates. E Dubai, ukubekezela bezinye izinkolo, kodwa ezinye imithetho yokuziphatha ezindaweni zomphakathi kumele uthobele yonke izivakashi. Ukuba umbuso lokudakwa ngeke bajeziswe ngokubhujiswa imali eshisiwe. Uphuthelwe ukudla ukuma noma sendleleni. Awukwazi ukundlula amaSulumane phakathi nomthandazo phambi. Ingena mosque, udinga zikhumule izicathulo zakho. Ukukhuluma bendawo, khumbula ukuthi ngeke ukwazi ukubheka namehlo omuntu ngokuxhawula ukuthi bazobalahla. Awukwazi ukubheka ubuso bomuntu, okuyinto yokudla umatasa.
Uchungechunge oluthi "isithunywa": nabalingisi, indima umqondisi